Warshad SOO SAARKA DIODE laser laser Timaha - Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha Shiinaha
Mashiinka caanka ah ee Vascular Spider Xididdada xididdada 980nm mashiinka daaweynta leysarka diode RBS07
Unugyada Vascular-ka waxay nuugaan leysarka tamarta sare leh ee dhererka dhererkiisu yahay 980nm, adkeyn ayaa dhacda, ugu dambeyntiina waa la kala diraa. Si looga gudbo casaanka daaweynta laser dhaqameedka weyn ee maqaarka gubanaya, naqshad xirfadeed gacan-qabad ..
Nd yag Q-Switch iyo Muuqaalka Ka-saarista Timaha 808 diode laser saarista timaha joogtada ah E9DQ
Diode 808 Laser waa heerka dahabka ee Ka saarista Timaha Joogtada ah wuxuuna ku habboon yahay dhammaan timo midab leh iyo noocyada maqaarka — oo ay ku jiraan maqaarka maqaarka leh. 808nm oo u dhow leys infrared ayaa ugu fiican nuugista melanin si ay waxtar badan ugu leedahay qaybaha kala duwan ee maqaarka
Singal Handle 3 Wavelength 755nm 808nm 1064nm Diode Laser Timo Saarista Y9 Faa'iidooyinka
Sida xalka isku dhafan, TERMINATOR 808 + wuxuu isku daraa faa'iidooyinka dhamaan 3 dherer dherer 808nm 755nm 1064nm, 3 dhererka dhererka waxay leeyihiin astaamo kaladuwan oo kaladuwan
1600W Soprano Ice Platinum 755 808 1064 Diode LASER Timo Jareynta Y9 Pro
Tikniyoolajiyadda saarista timaha laser-ka ee loo yaqaan 'Diode laser laser' waxay ku saleysan tahay isbedelka xulashada ee iftiinka iyo kuleylka. Laysaarku wuxuu maraa dusha maqaarka si uu u gaaro xididka xididdada timaha.
Timo Joogto Joogtada ah 808nm Diode Laser Vertical Y2
Inta lagu jiro daaweynta ka saarista timaha laser-ka ah, ileysku wuxuu soo maraa maqaarka waxaana dhex gala melaninta timaha.
Laser diode laser cusub 755 808 1064 laser saarista timaha laser88nm mashiinka saarista timaha laser diode laser Y8B
Laser diode laser cusub 755 808 1064 mashiinka saarista timaha laser waxaa lagu keydsadaa iyada oo loo marayo hal-abuurnimo farsamo, si daaweynta madaxa heerkulka xun, oo ka duwan laser-ka kale ay gubto maqaarka, si fiican maqaarka u ilaaliso.
808nm Diode Laser Timaha Mashiinka Timo Bixinta Ugu Fiican Salon Beauty Y9A
Tamarta leysarka isla markiiba si ay si wax ku ool ah u dhex gasho isku-uruurinta sare ee epidermis, lakabka maqaarka ee midabka si ay u gaaraan kooxaha, oo ah nuugista midabka u dhigma.
Iibinta kulul ee mashiinka saarista timaha laser diode 808nm awood leh Y9C
Laser epilator la qaadi karo oo aan ahayn diode laser 808nm mashiinka saarista timaha laser-ka joogtada ah Y9D
Diode 808 Laser waa heerka dahabka ee Ka saarista Timaha Joogtada ah wuxuuna ku habboon yahay dhammaan timo midab leh iyo noocyada maqaarka — oo ay ku jiraan maqaarka maqaarka leh.
Wareejinta 980NM diode laser mashiinka qurxinta timaha ee joogtada ah RBS02
980nm laser waa qaybta ugu wanaagsan ee nuugista unugyada xididdada xididdada ee Porphyrin. Unugyada Vascular-ka waxay nuugaan leysarka tamarta sare leh ee dhererka dhererkiisu yahay 980nm, adkeyn ayaa dhacda, ugu dambeyntiina waa la kala diraa.